Wasaaradda Qorshaynta Puntland oo Tababar u Qabtay Shaqaallaha dawladda – Puntland Voice
Wasaaradda Qorshaynta Puntland oo Tababar u Qabtay Shaqaallaha dawladda
February 10, 2018 8:59 am Views: 10
Shaqaalahaan ayaa waxaa lagu tababarayey sida loo isticmaali doono habraacyo la xiriira hannaanka Qiimaynta iyo Kormeerrada ama (M&E Framework) kaas oo dhowaan la dejiyey isla markaana ay ku jiraan shuruuc badan oo barnaamijkaasi la xiriirta.
Qiimaynta iyo kormeerrada mashaariicdu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiir dhexaadka u ah taabba-galka dawladdanimada, iyadoo taas laga duulayo ayaa shirka lagu casumey dhmmaan shaqaalaha dawladda khibradda u leh M&E si loo dardar-geliyo shaqada dawladda.
Tababarka ayaa socon doona muddo labo maalmood ah waxaan lagu lafo guri doonaa sidii ay shaqaaluhu u noqon lahaayeen kuwo faham buuxa ka haysta buugga habraaca M&E Framework iyo sidii loo isticmaali lahaa loogana faa’iideysan lahaa cilmiga dheeraadka ah ee buuggaasi lagu soo koobay.
6 months agohalkaaso labada dal ay wadahadallo uga furmayaan. Wafdiggaan ayaa waxaa hoggaaminaya wasiirka